Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Uganda gaa Dubai: ozugbo ha si na listi uhie uhie COVID pụọ
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Uganda na Dubai: Jikere maka ịpụ
Ndị ụgbọ elu Uganda na-aga ịmalite ụgbọ elu ogologo oge gaa Dubai nke akwadoro maka Ọktoba 2021, London na Guangzhou na-esochi ya ebe ndị Airbuses nwetara akwụkwọ ikike onye ọrụ ụgbọ elu (AOC) site na Uganda Civil Aviation Authority (UCAA) ụnyaahụ, Ọgọst 23, 2021. .
Mmepe a na-eweta njedebe nke usoro asambodo 5 na-adịte aka nke hụrụ ụzọ A330s nke onye na-ebu ya tọrọ ntọala na Entebbe.
Ụgbọ elu ugbu a nwere ike gbanwee n'etiti CRJ-900 na ikike dị elu A330 na ọrụ, dabere na ihe ndị njem na ibu chọrọ.
A ga-eji A330s rụọ ọrụ na London, Dubai, Mumbai, na Guangzhou ozugbo Uganda si na listi uhie COVID-19 pụta.
Onye isi osote onye isi oche nke UCAA, Fred Bamwesigye toro ndị otu ahụ ka ha rụchara nke ọma ịgbakwunye Airbus na Mitsubishi CRJ 900 na AOC n'oge emume nnyefe nke emere na Entebbe.
Akụkụ ikpeazụ nke usoro asambodo ọkwa 5 sochiri ụgbọ elu si Entebbe, Uganda, gaa Johannesburg, South Africa, mgbe onye isi ọzụzụ ọzụzụ Francis Barros na onye isi ọzụzụ Pete Thomase rutere Airbus #A330-800 series Neo na August 12, 2021, n'ọdụ ụgbọ elu OR Tambo International.
Mmepe ahụ na-eweta njedebe nke usoro asambodo 5-ogologo oge nke hụrụ ụzọ A330s na-ebu na Entebbe, na-echere AOC ebe ọ bụ na ụgbọ elu emechara iwu nke ụgbọ ala nke abụọ nke 2 A330s na February site n'aka onye nrụpụta Airbus na-echere AOC.
Ọ na-enye ụgbọ elu ugbu a mgbanwe iji gbanwee n'etiti CRJ-900 na ikike dị elu A330 na ọrụ, dabere na ihe ndị njem na ibu chọrọ.
Dabere na Onye isi oche ụgbọ elu Uganda, Jennifer Bamuturaki, a ga-eji A330s rụọ ọrụ na London, Dubai, Mumbai na Guangzhou ozugbo Uganda ga-apụ na ndepụta uhie COVID-19 na mba ndị ọ na-aga. Mmachi na -aga n'ihu na njem site na Uganda ahụla ka ọrụ a na -eme na Dubai ga -ada site n'otu ọnwa ruo Ọktọba, ebe ebugara nke ahụ na London na mbido 2022.
London, Mumbai, na Guangzhou so na ụzọ isi na-enweghị isi site Entebbe dị ka ọnụ ọgụgụ sitere na 2019. Ụzọ Entebbe-London nwere ndị njem njem 84,000 n'ime afọ, Mumbai sochiri 42,000 na Guangzhou na 29,000. Nke ahụ ga -anọchite anya ibu nke ndị njem 230 kwa ụbọchị n'etiti Entebbe na London - 115 ruo Mumbai na 79 na Guangzhou.
Na Uganda, site na Jenụwarị 3, 2020, ruo taa, Ọgọst 24, 2021, enweela ikpe 118,673 enwetara COVID-19 yana mmadụ 2,960 nwụrụ, kọọrọ Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO). Dị ka Ọgọst 23, 2021, ngụkọta nke E nyela ọgwụ mgbochi ọgwụ 1,163,451.